Cookie-Richtlinie (UK) | Safidy USA
Ity fanambarana fanaon'ny mofomamy ity dia nohavaozina farany tamin'ny 17 Jolay 2020 ary mihatra amin'ny olom-pirenena avy amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Ny tranokalanay, https://usa.option.news (manaraka izao: "ny tranokala") dia mampiasa mofomamy sy teknolojia hafa mifandraika (ho fanamorana ny teknolojia rehetra dia antsoina hoe "cookies"). Ny mofomamy dia apetraky ny antoko fahatelo izay efa raisinay. Ao amin'ny antontan-taratasy eto ambany dia mampahafantatra anao momba ny fampiasana cookies izahay amin'ny tranokalanay.
6.2 cookies cookies
Eto amin'ity tranokala ity dia mampiasa cookies cookies, ahafahantsika mahazo vahana amin'ny valin'ny fampielezan-kevitra. Miorina amin'ny mombamomba iray noforoninay araka ny fihetsikao izany https://usa.option.news. Miaraka amin'ireto cookies ireto dia mifamatotra amina ID tokana ny mpitsidika tranokala, nefa tsy hanome ny toetranao sy ny tombotsoanao hampiasana doka manokana.
Bokotra media 6.3 Social
Azafady vakio ny fanambarana momba ny tsiambaratelo amin'ireto tambajotra sosialy ireto (izay afaka miova tsy tapaka) mba hamakiana ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny angon-drakinao (manokana) izay ataon'izy ireo mampiasa ireo cookies. Ny angon-drakitra alaina dia tsy fantatra anarana betsaka araka izay azo atao. Any Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Disqus ary Pinterest no misy ao Etazonia.
_ym_d 1 taona Tsidiho ny fitsidihana voalohany amin'ilay tranokala
sc_is_visitor_unique 2 taona Mitahiry ny fitsidihana
wfwaf-authcookie- * 12 ora Fantaro raha miditra ny mpampiasa
googlesitekit_core :: site :: fampilazana
Mba hampihatra ireo zo ireo dia mifandraisa aminay. Azafady zahao ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin'ny faran'ny fanambarana cookie. Raha manana fitarainana momba ny fomba hitondranay ireo angon-drakinao ianao dia te handre avy aminao, saingy manana ny zonao hametraka fitarainana amin'ny manam-pahefana mpanara-maso (Office Commissioner's Office (ICO)) koa ianao.
Ity politika politika ity dia nifanaraka tamin'izany cookiedatabase.org tamin'ny 5 Aogositra 2020